Vehicle Taariikhda Wararka
Waxaa jira dad badan oo aan awoodin in ay iibsadaan gaari cusub, ama aad wax gadashada gaari ugu horeysay ee ka mid ah carruurta ay. Qofna ma doonayo in ay soo iibsadaan liin ah, ama gaari in uu ahaa shil xun, iyo qof kasta oo doonayo in uu baabuur loogu soo gato pre-leeyahay in ka badan tahay ama ka yar xaalad wanaagsan. Haddii aad ku talajirto in gadashada baabuurka pre-iska leh ah waxaa jira waxyaabo badan oo aad u baahan tahay in laga fekero inta aan go'aan ka gaari oo ay u soo iibsadaan iyo samaynta maalgelin ah. Malaha mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad sameyn karto si aad ka iibsato baabuur xun ilaaliyo waa iibsato warbixin taariikhda gaari, sidoo kale loo yaqaan jeeg VIN ah.
Ka hor inta iibsan ka hor leedahay baabuur waa in aad marka hore aad u ogaato qaar ka mid ah xaqiiqooyin aasaasi ah oo ku saabsan baabuur ee su'aasha si ay u caawiyaan xaqiijinaya in aad ku samaynayso maalgashi caqliga leh. Ma fiican gaariga nadiif ah oo dhalaalaya leh uumi immika qol engine nadiifiyo in aad raadinayso ee liin ah? Ayaa waxaa lagu shil baabuur xun, ama waxaa laga yaabaa in ay ahayd in daad, ama ka xun weli, ayaa waxa laga soo xaday? By iibsigu warbixin taariikhda baabuur oo socda VIN fiiri waxaad si fudud uga jawaabi karaan qaar ka mid ah su'aalahan iyo wax badan oo dheeraad ah oo dhan.
Badan oo ka mid ah khubarada ayaa kuu sheegi doona in isagoo warbixin taariikhda gaari on gaariga in aad ayaa ka fiirsaneysa inay u iibsan karaa waa mid ka mid ah u dhaqaaqdo xaragada badan waxaad samayn kartaa marka aad ku soo iibsato baabuur loo isticmaalay. Ma ogid waxa si gaar ah baabuur ama gaari laga yaabaa in ay ku dhex jirtay waa uu nool yahay. Waxaad la yaabi lahaa sida badan wax la qarin karo by nadiifinta weyn gudaha iyo dibedda si faahfaahsan iyo wax fiican ah, dhaldhalaalaan, jaakad ranji cusub.
Wararka taariikhda Vehicle iyo jeegaga VIN waa hab fiican si aad u hubiso record track ee dhammaan loo isticmaalo gawaarida iyo baabuurta ah. Wararka waxay bixiyaan iibsada la diiwaanka taariikhda baabuurta ku salaysan gaadiidka tirada taxanaha (Khamri), oo ay hubiso taariikhda gaari VIN. A jeeg tirada VIN wax ka tusi doono DMV diiwaanka caymiska iyo, sida ay suuragal tahay khiyaamo iyo igmashada, oo xusuusanaya, waayo, gaari iyo sidoo kale sharciga liin iibsan Dhabarkooda, iyo sidoo kale ka sii muhiimsan, waxay ku tusi doonaa yar ama dhaawac weyn oo isku dhac. Mararka qaarkood waxaa sidoo kale macluumaad la heli karo sida in haddii aan baabuurka ahaa raxan baabuur ama laga iibsaday raxan baabuurta kireeya.
Waxaa jira bogag badan oo online si loo hubiyo taariikhda gaariga iyo waxay qabtaan VIN raadinta ah. Wararka taariikhda Vehicle iyo jeegaga VIN ayaa diyaar u ah wax kasta oo ka soo gawaarida iyo baabuurta iyo SUV in ay mootooyin, ATV ee (Dhammaan dhul Baabuurta) iyo Gaadiidka tamashlaha ah (RV ee).
Intee in le'eg oo warbixinnadan ku kici kala duwan iibiya in iibiya oo caadi ahaan ku xeeran $20 si ay u $40 dollars. Kuwa in xayaysiiya oo lacag la'aan ah sida caadiga ah waa uun gartaan qalabka, kaas oo aynu ku heli doonaan in ay ka dib. Gadashada warbixin taariikhda gaari waa qiimo yar si ay ugu bixiyaan isagoo nabad qaar ka mid ah maskaxda ku saabsan gaariga ku saabsan si aad u iibsato aad tahay. Sidoo kale waa qadar yar oo ah lacag lagu bixiyo marka laga yaabo in aad badbaadin kartaa kun oo dollar in dhibaatooyin la gaariga ee dayactirka farsamo hoos wadada. Marar badan marka qof iibinta baabuur ay kuu sheegi karin oo ku saabsan dhibaatooyinka la gaariga. Xitaa ka dib markii imtixaanka baabuur oo run ahaantii si fiican u eego, laga yaabaa in aadan soo qaado ee wax kasta oo khalad ah oo la gaariga. Xataa marka aad qaadan gaariga si aad makaanik, ay hadda kasta oo markaas seegi waxyaalaha.
Haddaba sidaas daraaddeed waxaad ka arki kartaa sababta isagoo warbixin taariikhda gaari oo samaynaya baaritaan VIN yahay si aad u muhiim ah. Waxay kuu ogolaaneysaa in aad go'aan xog dheeraad ah oo ku saabsan gaariga aad ka fekereyso inaad ku saabsan gadashada. Xaaladaha intooda badan ay hareeraha ku kici $20 si ay u $40 iyo in ay ku brainer lahayn ka dhigaysa. Waa qadar yar oo ah lacag aad u maal caawin doona in aad ka fogaato gaari fadhiya dukaanka dayactir joogto ah iyo kor u dhamaado aad ujecel ton lacag.
Best Cheap Wararka History gaariga iyo Cheap Vin Check Reviews